Global Voices teny Malagasy » Afrika: Firenena maro no tsy mahatsiaro ny Andron’i Afrika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Mey 2009 8:44 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Lila
Sokajy: Etiopia, Namibia, Zambia, Zimbaboe, Politika, Tantara
Ny Andron'i Afrika dia fahatsiarovana isan-taona ny 25 may 1963 izay vanin'andro nijoroan'ny Firaisam-be Afrikaan na ny OUA tany Etiopia. Hetsika maro no nankalazana azy ity tany amin'ny faritra samihafa eran-tany. Nahatsiaro izany vanin'andro izany koa ny mpitoraka bilaogy sy ny mpiserasera twitter ka manoratra mamelabelatra momba ity Andron'i Afrika 2009 ity .
Henonay tamin'ny alalan'i Zambia Watchdog fa firenena 4 ihany ao anatin'ny SADC no nanao ny Andron'i Afrika ho andro tsy fiasana:
Raha iverenana dia tahaka ny hoe tsy tsaroana intsony ny firaisan-kina nasehon'i Afrika nandritra ny fanoherana ny fanjanahan-tany sy ny imperialisma. Amin'ny faritra sasany ao Afrika dia mpitondra maro no tsy mihevitra afa-tsy ny olana mandifotra ny kaontinanta.
Tsy mahamenatra ve izany hoe firenena vitsy monja no mba mahatsiaro ny Andron'i Afrika? Tsy mahamenatra ve izany hoe firenena vitsy monja no manao ny Andron'i Afrika ho andro tsy fiasana? Lesona inona no hampianarina ny taranaka?
Raha jerena ny tetiandron'ireo mpikambana 14 ao amin'ny SADC dia fantatra fa firenena 4 ihany – Namibia, Tanzania, Zambia ary Zimbabwe – no mba mahatsiaro ity Andron'i Afrika ity ka manao azy ho andro tsy fiasana. Ao amin'ny SADC ihany dia Namibie irery ihany no firenena mihira ny hiram-pirenen'i Afrika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fivoriana samihafa sy any an-tsekoly.
Milaza ny zava-nisy tany Afrika Atsimo i Jason Von Berg nandritra ny fankalazana ny Andron'i Afrika:
Ho fakalazana ny Andron'i Afrika dia zavatra maro no niseho tany Afrika Atsimo. Natao tao amin'ny kianja malalaka Mary Fitzgerald Square tao Newton, Johannesbourg… ny fampisehoana rindran-kira fanao isan-taona hankalazana ny Andron'i Afrika.
Aleo horesahana kely ny rakin-kira sary mihetsika, zavatra manintona hafa koa natokana ho an'ny Andron'i Afrika izy ity. Hita ao ilay mpihira Namibiana Gazza mampiaram-peo amin'ilay mpanakanto malaza Afrikana Tatsimo Zola amin'ilay hira hoe “Hold on”. Notohanan'ny UNICEF sy ny Standard Bank Namibia ity hira ity ary miantso ny Afrikana rehetra hanambatra ny hery hiady amin'ny faharatsiana sy ny ady isan-karazany mamotika ny sarin'i Afrika…
Ny tena zavatra tsara hankalazana ny Andron'i Afrika dia ny fiasana mafy hoy Root Cause:
Amin'ny maha Afrikana ahy sy ny maha taranaka vaovao ahy aty Afrika Atsimo dia tsy maintsy mijery ireo firenena hafa ato anatin'ny kaontinanta aty amin'ny ilany avaratra aho ary manontany tena raha ho tafavoaka amin'ny fahantrana sy ny alahelo izay zary fiainana mahazatra ao amin'ny fiaraha-monina isika.
Kanefa na dia manana olana mampatahotra ahy aza aho dia manana fijery miabo; manana fanantenana aho fa ity taon-jato ity dia natao ho an'i Afrika. Fotoana hisondrotana avy amin'ny alalan'ny tsy misy. Handroso amin'izay!
Nanohana ny fankalazana ny Andron'i Afrika nataoa tany Ireland ny Irish Aid araka i Culch izay mitantara ny zava-nisy tany Dublin:
Nanomboka ny alahady 24 may tamin'ny 12 ora hatramin'ny 8 ora alina dia nisy varavarana misokatra natao hankalazana ny Andron'i Afrika tao Iveagh Gardens tao Dublin. Nisy fanazavana mafonja isan-karazany nomena tao ka nahazo ny anjarany daholo na ny ankizy na ny lehibe.
Misy sary nankalazana ny Andron'i Afrika 2009 tany Ireland:
Nandefa sary “Africa Day Limerick”  i Bock:
Tena adala mihitsy ireo Afrikana ireo. Tena mahamenatra ny hanaovany amin'ny toetr'andro aty Ireland.
mahamenatra satria tsy misy Irlandais manao ny ataony na dia iray aza na dia avy foana aza ny orana aty.
Tsy misy saina.
Tsy nahomby tamin'ny fianarana lesona momba ny fokoloana vatana izy ireo hoy Angela Kintu ao amin'ny sorany mikasika ny Andron'i Afrika:
Kely ny fisainan'ny Afrikana raha eritreretina ny maha mpifanolobodirindrina ny kaontinanta misy antsika. Ary raha mivoaka ny mpifanolobodirindrina ka miezaka mamorona ho an'ny fotoana ratsy dia mitsikombakomba amin'ny hoe izy efa nandemy ny saintsika ka tsy ananany fahefana ny vatantsika. Mety ho izany, mety ho tsy izany. Ny zavatra misy aloha dia hoe tsy nahomby tamin'ny fianarana lesona amin'ny fikarakarana ny momba antsika isika. Ho tahaka ny voron-drano ao anaty lavaka ihany, miandrandra sady mitanatana vava miandry izay hamahana hazandrano maimaim-poana.
Namorona pejy manokana ao amin'ny serasera twitter momba ny Andron'i Afrika ny Irish Aid. 
Indreto ny rohy serasera mety ho hitanao ao mikasika ny Andron'i Afrika:
NeoAid: Misy ny zaatra ahafantarana an'i Afrika ankoatra ny lohateny mahazatra (fahatrana/AIDS/ady/hanohanana) – Jreo amin'ny endrika hafa i Afrika #africaday http://ow.ly/94cS
tsepeaces: Arahabaina nahatratra any andron'i Afrika! #africaday
NeoAid: Raha any Ireland ianao amin'ity #africaday dia Jereo ny resaka fanampian'ny Irelandey http://ow.ly/94aT n araho @AfricaDay
neoaidcom: Raha any Ireland ianao amin'ity #africaday dia Jereo ny resaka fanampian'ny Irelandey http://ow.ly/94ay n araho @AfricaDay
micknsk: RT @negrita Tahaka ny ahoana ny fahafinaretana/Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona/Mahita ny firaisan'ny Afrikana rehetra. Africa Unite #africaday
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/28/2414/
 “Africa Day Limerick”: http://bocktherobber.com/2009/05/4231